India Travel Agents uye Nepal Tourism Board Zvino Joinha Maoko
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India Travel Agents uye Nepal Tourism Board Zvino Joinha Maoko
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
India neNepal vanobatana
The Travel Agents Association of India (TAAI) yakasaina Memorandum of Understating (MOU) muna Gumiguru 22, 2021, neNepal Tourism Board kusimudzira nekusimudzira kushanya kwenyika mbiri.
Chibvumirano cheMOU chinotarisa kusimudzira zvinofarirwa uye vanosvika vashanyi kuburikidza nekushandira pamwe uye nzira yekushandira pamwe panhevedzano.
VaJyoti Mayal, Mutungamiri weTAAI, vakati vari kutarisa nezvekusimudzira zvigadzirwa zvekushanya izvo zvinosanganisira rubatsiro rwenyika mbiri mukusimudzira kushanya.
Izvi zvichaitwa kuburikidza nezviitiko, maroadshows, conclaves, summit, webinars, nezvimwe, kuratidza kugona kwekushanya kwenyika mbiri idzi.
Jyoti Mayal akaendesa uye akataura kuti India uye Neparo kugovana miganhu uye, nekudaro, nyika mbiri idzi dzinofanira kusimudzira kushanya kwakawanda, kunyanya mushure medenda. Ose ari maviri anodikanwa kuve akanyanya kuronga uye kugamuchira kune mitsva mitsva uye nzira dzekushambadzira. Tourism munyika mbiri idzi inogona kuona kukura kwakakosha uye inogona kupedzisira yave nhamba yekutanga sosi musika.
Anoop Kanuga, Nhengo yeDare Rekutungamira, TAAI, akaratidza kuonga kwake uye akatenda Dr. Dhananjay Regmi, CEO, Nepal Tourism Board (NTB), uye boka rayo rose nokuda kwekutsigirwa uye kubatana kwakawedzerwa kuTAAI. Akasimbisa hukama hwekare hweIndia neNepal uye kuti TAAI yakabatsira sei mukusimudzira nekusimbisa zvakafanana nekufambisa kufamba nekutengeserana pakati penyika mbiri idzi.
Zviitiko zvakanangana zvinogona kuverengerwa pasi peMOU iyi, uye mapato ese ari maviri zvichienderana nenhaurirano nenhaurirano achagadzira nzira dzekusimudzira nekusimudzira kushanyirwa kwenyika mbiri idzi, akadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaJay Bhatia.
VaBettaiah Lokesh, vanoremekedzwa Munyori Mukuru, vakasimbisa kukosha kwekufambisa kukoka kune mumwe nemumwe kuzviitiko zvepagore zvinosanganisira makonferensi, matravel Marts, nezvimwe zviitiko zvechimbichimbi zvenyika nedunhu, uye vakatenda NTB nekubvuma kuisa pfungwa iyi muMOU.
Kutsinhana kweruzivo, uko kunobata basa rakakosha mukuvandudza nzira dzekuvandudza zvekushanya zvine chekuita nekuvandudzwa kwezvivakwa, analytics, uye imwe data, nezvimwewo, inzvimbo yakasarudzika yakawedzerwa kuMOU akadaro Shreeram Patel, Honorary Treasurer.